Ushicilelo olunqunyelweyo lubetha i-Studio3 ngaphandle kwentambo ngokusebenzisana ne-Psychworld | Ndisuka mac
Ushicilelo olunomda iBeats Studio3 engenantambo ngokusebenzisana noPsychworld
I-Psychworld kunye nomqokeleli uDon Toliver baye badibana ukuze benze ifayile ye- ushicilelo olutsha olunomda yeBeats Studio3 engenazingcingo. Ii-headphone zohlobo lweMelika oluqhubeka nokunika umdlalo omninzi nangona usungule i-AirPods Max. Ayiloxesha lokuqala, kwaye ngokuqinisekileyo ayikokugqibela ukubona uhlelo olukhethekileyo lolu hlobo. Ii-Beats zii-headphone ezizibolekayo kuyo kwaye olu hlelo luqhelekile kubadali bayo.
Rapper UDon Toliver kunye nePsychworld badibene nomkhosi ukuze basungule ii-headphone ezintsha. Ngeli thuba abo banethamsanqa baya kuba yi-Beats Studio3 Imodeli engenazingcingo eza kuza ne Umbala oluhlaza we-neon, kunye nohlobo loyilo lokufihla. Sele uyazi ukuba sithetha ngee-headphone eziphezulu. I-Beats Studio 3 i-Wireless zii-headphone ezine-chip ze-WP ze-W1, izibuko elincinci le-USB kunye nokucinywa kwengxolo okusebenzayo. Kakhulu kwinqanaba labanye abaninzi kwintengiso, nkqu nee-AirPods Max.
Ngokungafaniyo nemibala yemveli ye-Studio3, le ntsebenziswano ifaka umbala we-neon oluhlaza ngombala ngokusebenzisa i-Beats Studio3 ye-headphone silhouette, isebenzisa ithuba Ukuprinta kwe-digi-camo kunye ne logo yePsychworld kwintloko yentloko. Abenzi bePsychworld bathi:
Le projekthi ine-Beats iqhubekile okwethutyana, kwaye sonwabile ekugqibeleni ukuba sikwazi ukuyityhilela wonke umntu. Siya iphefumlelwe kakhulu ngumculo, ke kuyamangalisa ukusebenzisana neBeats kunye nomnye wabaculi bethu esibathandayo ababonisa ngokwenyani ukuba yeyiphi iPsychworld.
Olu hlobo lilinganiselweyo lwabhengezwa kwisitishi se-Beats se-YouTube. Ngokwenkampani, le headset iya kukhutshwa nge-22 ka-Epreli kwaye iya kufumaneka kwi Indawo yePsychworld. Zimbini ezishiyekileyo zokuphehlelelwa ngokusesikweni, ke ukuba ubuza kuthenga ii-headphone, ayilombono mibi ukuba ulinde iiyure ezingama-48 ngaphezulu, kwimeko apho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ushicilelo olunomda iBeats Studio3 engenantambo ngokusebenzisana noPsychworld
Ukuboniswa kwe-iPad kuqala
Ivenkile ye-Intanethi ye-Apple ivaliwe, intetho ephambili ikufuphi